I-Exclusive Apartment. Indawo emaphakathi enhle kakhulu.
Ifulethi elinethezekile nelikhanyayo esakhiweni sesimanje esinendawo engahlulwa lutho enkabeni yedolobha Ukubuka okuyingqayizivele okuvela kule ndawo Imininingwane yekhwalithi ephezulu, yenza indawo yokunethezeka, ifakwe izinto zikagesi zesimanje, njenge-microwave, ugesi. kuhhavini, esiqandisini nge efrijini, air conditioning amakhaza nokushisa SmartTV nge ikhebula ithelevishini Ifanele ehhovisi ekhaya, ngoba high speed internet Isakhiwo gym futhi endlini yokuwashela nje kwemizuzu engu-15 esikhumulweni sezindiza
Ifulethi eliphezulu esakhiweni sesimanje esinezitezi ezingu-25 esinokuphepha kwamahora angu-24. Ivulekile futhi ikhanya, inovulandi ohlomele ukujabulela ngokunethezeka ukubuka okuhlukile kwedolobha. Ithule naphezu kwendawo emaphakathi, njengoba inezingilazi eziphindwe kabili zokuvuleka (DVH) kanye nomnyango Wezokuphepha wohlobo lwePentagon. Indawo engenakunqotshwa, enhliziyweni yedolobha, etholakala emabhuloki ambalwa ukusuka enkabeni yomlando yedolobha, indawo yezimali kanye nesinye sezikhungo zokuthenga ezibaluleke kakhulu edolobheni "Patio Olmos". Futhi itholakala endaweni efanayo neMayo Sanatorium kanye neReyes Giobelina Eye Clinic.
Indawo ethule enkabeni yedolobha, enokufinyelela ngokushesha ku-Av. Costanera, ekuvumela ukuthi uthuthele ngokushesha ezindaweni ezihlukahlukene ezithakazelisayo. Ngokunjalo, ukuzivocavoca umzimba kungenziwa endleleni yomjikelezo ogijima eduze kwendlela eshiwo kanye nembangela yomfula iSuquia. 15 imiz. Kusukela esikhumulweni sezindiza.
Izivakashi zingaxhumana nomsingathi noma nini, ngefoni noma nge-imeyili.